သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့ မည့်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌနေရာ အတွက် လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်မောင် ကိုပင် ဆက်လက - Yangon Media Group
သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည့် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ နေရာအတွက် လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ ဦး ကျော်ကျော်မောင်ကိုပင် ဆက်လက်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်သို့ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင် အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဇူလိုင် ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယ နေ့တွင်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ”မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ် မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နဲ့ (ခ)အရ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုသက်တမ်းကာလက မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာပြီး ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ လစ်လပ်လာမယ့် ဥက္ကဋ္ဌနေရာ ရာထူးမှာခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမည်စာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နဲ့ အညီ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ သဘောတူညီချက် ရယူပေးနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကထံသို့ ပေးပို့ထားပါတယ်။ နိုင်ငံ တော်သမ္မတထံမှပေးပို့စာကို လွှတ် တော်သို့ဖတ်ကြားတင်ပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအ ဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အမည်စာရင်းကိုကြေညာပါမယ်။ လစ်လပ်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရာထူး နေရာတွင် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ အရည်အချင်းများနဲ့ကိုက်ညီသော ဦးကျော်ကျော်မောင်အား ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင် ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ်မ- ၉ ပုဒ်မခွဲကပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သဘော တူညီချက်ရယူပေးနိုင်ပါရန် ကိုယ် ရေးမှတ်တမ်းပူးတွဲလျက်ပေးပို့ပါသည်”ဟု ယင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှပေးပို့သောစာကို ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးကျော်ကျော်မောင်သည် ပြီးခဲ့သည့်အစိုးရလက်ထက်ကလည်း ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို တာဝန်ယူခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်အထိလည်း ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ”နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ အဆိုပြုတင်ပြလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ကန့် ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက ခန့်အပ်ရန်သဘောတူကြောင်း ကြေညာခြင်း (သို့မဟုတ်) ကန့်ကွက်လိုတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါက ကန့်ကွက်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းမည့် အစီအစဉ်ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၃၁ ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအ ဖြစ် ခန့်အပ်လိုကြောင်း အဆို ပြုတင်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ်မ- ၁ဝ ပါ သတ်မှတ်ထားတဲ့အရည် အချင်းများနဲ့မပြည့်စုံကြောင်း သက် သေအထင်အရှားပြ၍ ကန့်ကွက်လိုတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါက ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၃ဝ ရက် တနင်္လာနေ့ မွန်းလွဲတစ်နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးထံ အမည်စာရင်းပေးပို့နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်မောင်ကို ပြန်လည်အဆိုပြုခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်အမတ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်အား မေးမြန်း ကြည့်ရာတွင် ”ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတစ်ဦးတည်းသဘောဆန္ဒပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ကဗဟိုဘဏ်ကို အများကြီးပြောင်းလဲစေချင်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီဥက္ကဋ္ဌရဲ့နေရာအစား အခြားခြား လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေလည်း ပြည်တွင်းမှာများစွာရှိတယ်။ အဲဒီပညာရှင် တွေထဲက လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိပြီးကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အစိုးရသက်တမ်းမှာ အားကောင်းမောင်းသန် လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့။ ကျွန်မတို့ ဒါမျိုးတော့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးကျော်ကျော်မောင် ပြန် ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဗဟိုဘဏ်ကို ယခင်ကတည်းက ထိန်းကျောင်း လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ် ငန်းတွေအနေနဲ့ အခက်အခဲလည်း သိပ်မရှိဘူး။ ပိုပြီးတော့လည်း ဒီကိစ္စတွေကို အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြောချင်တာ ထိန်းကျောင်းထားနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိထက်ပိုတိုးတက်ပြီးပိုပြီး ကောင်းအောင်လုပ် နိုင်ဖို့ရာ အခြေအနေတစ်ခုကို သူ့ဘက်ကနေပြီး ကျွန်မတို့က သိပ်ပြီး မျှော်လင့်ထားလို့တော့မရဘူး။ ဦး ကျော်ကျော်မောင်ကို ပြန်ပြီးရွေးချယ် တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ လူကြီး တွေပဲ ရွေးချယ်ကြတာဆိုတဲ့အခြေ အနေတစ်ခုမှာ ကျွန်မတို့ဘက်က ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိဘူး။ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဦးကျော် ကျော်မောင်က အတွေ့အကြုံရှိလူ ဟောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါ တွေရဲ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချတယ်လို့ ကျွန်မတို့မြင်တယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ၏ ငါးနှစ်သက်တမ်းသည် ဇူလိုင်လအကုန်တွင် ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲ၌ အင်မရန်ခန်း၏ ပါတီ အနိုင်ရရန် နီးကပ်လာ၊ ပြိုင်ဘက်များက မဲလိမ်မှု ရှိသ?
”အသစ်ကလေးတွေက ရှေ့ကလူတွေလို ဇာတ်ကိုမပို့ပေးနိုင်တော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီလူတွေနဲ့ပဲ ရိုက်နေ??